I-AutoSEO vs FullSEO: Iyiphi Semalt SEO Service okufanele Uyikhethe?
Ukusebenza Kwenjini Yosesho kuyindaba ekhohlisayo. Ngenkathi cishe wonke amabhizinisi manje ethembele ku-SEO ukubeka inhlangano yawo phambi kwamehlo afanele, futhi kuyiqiniso ukuthi bambalwa kuphela onjiniyela abakwazi kahle lokho iGoogle nezinye izinjini ezinkulu ezifunayo. Ukugcina izinga lenkambu yokudlala, izihluthulelo zokusebenzisa amandla wenjini ziyimfihlo eqashelwe kakhulu.
Lokhu kusho ukuthi amathuluzi we-SEO kanye nokwenza okuhle kakhulu akususelwa kusethi yemiyalo enikezwe i-Google, kepha ngokuhlola ukuthi yini okusebenzayo nokuthi yini okungasebenzi. Umsebenzi omningi owenzayo ekusetshenzisweni kweinjini yokucinga, kucacisa okufunwa, izidingo nokukhethwa kwezinjini ezinkulu zokusesha.
KwaSemalt sichithe iminyaka eyi-10 sihlonipha amakhono ethu e-SEO. Manje sesihlaziye cishe iwebhusayithi eyi-1.5 yezigidi futhi siziqhenya ngabasebenzisi ababhalisile abangaphezu kuka-600,000. Sinokuqonda okujulile kwalokho okudingekayo ukuze inhlangano yakho ingabi ekhasini lokuqala le-Google kuphela, kepha phezulu kakhulu kwezikhundla. Eminyakeni eyishumi edlule, sisebenze kanzima ukuze sibe umhlinzeki we-SEO ozikhethela izinhlangano eziningi eziholayo.
Kepha iyiphi yezinsizakalo zethu ze-SEO okufanele ukhethe? Namuhla sizobe sibheka amaphakheji ethu e- AutoSEO ne- FullSEO ; umehluko, ukufana, nendlela yokuthola ukuthi iyiphi indlela okulungele wena.
Yini i-AutoSEO ne-FullSEO?
Into yokuqala yokuqala: yini ngempela i- AutoSEO ne- FullSEO?
Ezingeni elibanzi, i-AutoSEO ne-FullSEO yimikhiqizo emibili ehlose ukwenza into efanayo: yenza iwebsite yakho ithuthukise izinga lakho lenjini yokucinga. Ziyimikhiqizo thina kwaSemalt esithuthukise yona ngaphakathi, futhi ngayinye isetshenziswe ngamabhizinisi cishe kuwo wonke amazwe emhlabeni.
Kepha kulokhu kufana okuyisisekelo, imikhiqizo iqala ukuphambuka.
I-AutoSEO iyithuluzi eliqondayo elizenzakalelayo elimelela iphakheji yethu yezinga lokungena. I-AutoSEO yenzelwe noma ngubani othatha izinyathelo zabo zokuqala ezweni le-SEO futhi abeke umsebenzisi ukuthi alawule.
I-FullSEO yiphakheji yethu ephelele ye-SEO. Yakhelwe noma ngubani okulungele ukuthatha ngokungathi sina injini yokucinga futhi ufuna imiphumela emihle, esheshayo futhi ehlala isikhathi eside. Ungashiya konke ukuphakamisa okusindayo kithi, njengoba abasebenzisi be-FullSEO bethola ukufinyelela eqenjini lethu lochwepheshe be-SEO.
Ake sihlolisise lezi zixazululo, sibheke ukuthi kusebenza kanjani ngakunye.
Igayidi eya ku- AutoSEO
Ngabe ufuna ukukhulisa ukubonakala komkhiqizo nokuthengisa? Ngabe uthatha izinyathelo zakho zokuqala ezweni lokusebenziseka kahle kwezinjini zokucinga? Ngabe ufuna ukubona eminye imiphumela ngaphambi kokuzibophezela ekutshaleni imali enkulu?
I-AutoSEO ingaba ngumkhiqizo wakho.
Iphakheji ye-AutoSEO kaSemalt yenzelwe amabhizinisi afuna ukukhulisa ithrafikhi yesayithi, kepha angafuni ukutshala imali ekukhuthazeni isayithi esiteji sokuqala, okungenani aze abone imiphumela yangempela. I-AutoSEO ikubeka esihlalweni somshayeli, ikuvumela ukuthi uqale umkhankaso we-SEO ngemali engaphansi kwe- US $ 0.99.
Isebenza kanjani i-AutoSEO?
Ake sibheke ukuwohloka kwendlela esebenza kahle i-AutoSEO.
Ukubhalisa: Uqala inqubo ngokugcwalisa ifomu lokubhalisa le-AutoSEO elilula.
Ukuhlaziywa kwewebhusayithi : Iwebhusayithi yakho iyahlaziywa, futhi i-AutoSEO izobika ukuthi isiza sakho senziwe kahle kanjani ngokumelene nokwakhiwa kwewebhusayithi namazinga embonini ye-SEO.
Ukuthuthukiswa Kwamasu : Ukusebenza nomunye wochwepheshe bethu abakhulu be-SEO, umphathi wakho weSemalt uzoqhuba ukuhlaziya okuphelele kwewebhusayithi yakho, bese enza uhlu lwamaphutha nokungasebenzi kahle okudinga ukulungiswa.
Ukwenza izincomo zombiko: Uma nje sesinikezwe imvume yokudlulisa ifayili (i-FTP) noma ukufinyelela kwe-CMS admin, onjiniyela bethu bazosebenzisa izincomo ezenziwayo ukuze baqinisekise umkhankaso ophumelelayo we-AutoSEO.
Ukucwaninga kwegama elingukhiye: Unjiniyela we-SEO wakha uhlu lwamagama angukhiye okufanele afakwe kwiwebhusayithi yakho, okhethwe ukwandisa ukuthengisa kanye nokuhamba ngezimoto.
Ukwakhiwa kwesixhumanisi : I- AutoSEO iqala ukubeka izixhumanisi zemvelo isuka emithonjeni ethembekile kuyo yonke indawo yakho, ikhulisa ukubonakala kwenjini yayo. I-Semalt ine-database yezindawo ezisezingeni eliphakeme ezingaphezulu kuka-50 000, futhi izixhumanisi zikhethiwe kususelwa kubudala besizinda ne- TrustRank. Ukwakhiwa kwesixhumanisi kwenziwa ngesivinini esilinganisiwe kuya kwesilinganiso esilandelayo: izixhumanisi zegama lomkhiqizo eziyi-10%, izixhumanisi ezingama-40% amahange, izixhumanisi ezingama-50% ezingezona izikhonkwane.
Ukulandelela umkhankaso: Impumelelo yomkhankaso wakho ilandelwa ngesibuyekezo samazinga nsuku zonke sohlu lwamagama angukhiye athuthukisiwe.
Ukuqapha okuqhubekayo: I- AutoSEO iyaqhubeka nokubheka inqubekela phambili yomkhankaso, inikeze imibiko nge-imeyili noma ngohlelo lwangaphakathi lwesaziso.
I-AutoSEO yenzelwe labo abafuna ukufunda okwengeziwe nge-SEO ngaphambi kokutshala imali enkulu. Kungenxa yabahloli nabathengisi abathanda ukucaca nokulawula. Kungenxa yanoma ngubani ofuna ukuqala uhambo lwabo lwe-SEO ngendlela engabizi futhi enolwazi.
Isiqondisi esiya ku- FullSEO
Ngabe ufuna ukuba phambili? Ngabe uyakuqonda ukubaluleka kokusebenza kahle kwenjini yokusesha, futhi ufuna isisombululo esiphelele nesisebenzayo? Ngabe ufuna ukutshala imali eqenjini eliqinisekisiwe elinganikeza imiphumela engcono kakhulu?
I-FullSEO yiphakheji elifanele.
I-FullSEO iyiRoll-Royce yeminikelo ye-SEO kaSemalt. Kuyisixazululo esihlanganisiwe necebo eliphelele le-SEO ngasisekelo sayo. Uthola ukuhlaziya okujulile kusuka kwizazi ezihola phambili emkhakheni, hhayi indawo yakho kuphela, kepha ngezindawo zabaqhudelana kanye ne-niche lapho inkampani yakho isebenza khona. Isebenzisa amasu ngokuphelele, afakazelwe we-SEO, futhi inikezela ngokuthuthukiswa okugcwele kwesayithi yiqembu labachwepheshe bakwaSemalt abazobe bekhulumisana njalo. Le phakheji iqinisekisa ukukhula okuthe xaxa kwewebhusayithi namanani wokuguqula aphezulu.
Isebenza kanjani i-FullSEO?
Iphakethe le-FullSEO lingahlukaniswa ngezigaba ezine ezibalulekile: ukuhlaziya, ukwenziwa ngcono kwangaphakathi, ukwakhiwa kwesixhumanisi nokusekelwa.
Ukuhlaziywa okujulile kuzokwenziwa yiqembu lezazi zeSemalt SEO kanye nemenenja yakho ye-Semalt. Lokhu kucubungula kuzofaka:
Ukuhlonza amagama angukhiye afanele kakhulu okuheha izethameli ezinkulu kakhulu futhi ezihlosiwe kakhulu.
Ukuhlaziya ukwakheka kwewebhusayithi nokusatshalaliswa kwegama elingukhiye ukuze ubone ukuthi ihlangana kanjani nezinqubo ezinhle kakhulu ze-SEO nokukhetha amakhasi e-web azogxila ekuphakanyisweni kwewebhusayithi.
Ukubutha imininingwane mayelana newebhusayithi yabaqhudelana bakho ne-niche ukuze uzuze izinga eliphakeme kakhulu lakwaGoogle.
Lapho ukuhlaziywa sekuqediwe, iqembu labachwepheshe be-SEO, elisebenza ngokuhambisana nomthuthukisi wewebhu we-Semalt, lizokwenza umsebenzi wangaphakathi wewebhusayithi yakho ukuze lihlangabezane nenqubo yokulinganisa yezinjini zokusesha futhi lisuse noma yimaphi amaphutha noma izingqinamba ezingakubamba emuva. Isigaba sokukhulisa ngaphakathi sizofaka:
Ukudalwa kwamathegi we-meta nama-alt tag asuselwa ekuhlaziweni kwegama elingukhiye langaphambilini.
Ukuthuthukisa kanye nokucebisa ikhodi ye-HTML yewebhusayithi nokubeka izimfanelo ezidingekayo.
Kuhlelwa ama-robots.txt namafayela we-.htaccess ukuze iwebhusayithi ibonise ezinjini zokusesha njengoba kufanele. Kwenziwa ifayela le-sitemap ukuze kukhonjiswe ngokuphelele amakhasi e-webhusayithi.
Ukubeka izinkinobho zemidiya yokuxhumana nabantu kuwebhusayithi ukuze uhlanganyele ngcono.
Yize kungathathwa njengengxenye yenqubo yangaphakathi yokwenza kahle, ukwakha izixhumanisi kubalulekile ngokwanele ukuba kube yisinyathelo uqobo. Ngesikhathi sokwakha izixhumanisi, iqembu lethu lochwepheshe be-SEO lizo:
Hlaziya 'ijusi yokuxhumanisa yewebhusayithi yakho' (inani lenjini yokusesha noma ukulingana okudluliselwe ekhasini elilodwa kuye kwelinye).
Vala izixhumanisi zangaphandle ezingadingekile noma ezingenasisekelo ukuze ulondoloze ikhwalithi yekhasi lewebhu.
Khomba izindawo ezinhle kakhulu zokubeka izixhumanisi ezintsha, ezisebenza ngempumelelo.
Dala isixhumanisi sesixhumanisi esihlobene ne-niche esidingekayo ukufinyelela amabala aphezulu ku-Google. Lokhu kwenziwa ngokuhlanganisa izixhumanisi zekhwalithi kokuqukethwe okungafani nalokhu okuhlobene nesihloko sakho ukukhulisa amandla wokunyuswa kwakho.
Iphutha lekheli 404 imiyalezo futhi ususe izixhumanisi eziphukile.
Okokugcina kodwa ngezindlela eziningi, ucezu olubaluleke kakhulu lwepuzzle ye-FullSEO ukuxhaswa okuqhubekayo okunikezwe ngumphathi wakho we-Semalt. Umphathi wakho uzoqapha inqubekela phambili yomkhankaso wakho we-FullSEO nsuku zonke, enze ukulungisa futhi akugcine uthumele zonke izinyathelo zendlela. Umphathi wakho uzo:
Nikeza imibiko yansuku zonke noma ecelayo yokuqhubeka komkhankaso.
Ukunika ukufinyelela esikhungweni sokubika lapho ungahlola khona imininingwane yokuhlaziya eningilizayo.
I-FullSEO yenzelwe wonke umuntu okulungele ukuthatha ngokungathí sina ukwenziwa kweinjini zokucinga, kungaba yibhizinisi elikhulu lezwe noma lebhizinisi elincane. Iphakethe eliphelele likuvumela ukuthi ubandakanyeke noma ungabinazandla ngendlela othanda ngayo. Uma ufuna ukukhulisa ithrafikhi yewebhusayithi yakho, izinga lokuguqulwa kwakho noma umugqa wenkampani yakho ephansi, alikho ithuluzi elingcono elitholakalayo.
I-AutoSEO vs FullSEO: ukwenza ucingo
Futhi ungaqiniseki ukuthi iyiphi iphakheji okufanele uyikhethe?
Enye inketho ukuqala uhambo lwakho ngezinsuku eziyi-14, akunakuhlolwa kwesibopho kwe-AutoSEO ngama- $ 0,99 kuphela. Uma uzizwa sengathi ufuna okuthile okwengeziwe, ungashintshela kalula ku-FullSEO!
Enye inketho ukuzwa ukuthi amakhasimende ethu athini mayelana nokukhetha ngakunye. Bheka ikhasi lethu lobufakazi beklayenti ukuthola imininingwane yokuthi ezinye izinhlangano zizizwe kanjani ngephakheji ngalinye - izinzuzo, izinzuzo nezinto okufanele ucabange ngazo.
Ekupheleni kosuku, noma ngabe ukhetha muphi iphakheji, ungaqiniseka ukuthi iwebhusayithi yakho nenhlangano yakho iyonke kuzoba ngcono kuyo. Isikhundla esithuthukisiwe seGoogle, ithrafikhi ethe xaxa, isilinganiso esiphezulu sokuguqula nomugqa ophansi ongcono ongafinyeleleka.
Asikho isikhathi sokuchitha. Xhumana neqembu lethu elinobungane namuhla!